VANCH - လက်ကိုင် UHF RFID Reader, UHF RFID တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူ / ပေးသွင်းသူ
Vanch ထုတ်ကုန်များတွင် UHF RFID စာဖတ်သူများပါဝင်သည်, UHF RFID ပုံသေဖတ်ရှုသူ, UHF RFID ဘက်စုံသုံးစာဖတ်သူ, Android UHF RFID လက်ကိုင်စာဖတ်သူ, ဘလူးတုသ် UHF RFID လက်ကိုင်စာဖတ်သူ, UHF RFID desktop စာဖတ်သူစာရေးဆရာ, UHF RFID စက်မှုစာဖတ်သူ, UHF RFID ဂိတ်စာဖတ်သူ, UHF RFID အပိုင်း, UHF RIFD အဝတ်လျှော်ခလုတ်, UHF RFID သတ္တုဆန့်ကျင်ရေးတံဆိပ်, RFID အင်တင်နာ, RFID tag နှင့်စသည်
UHF RFID သည် Reader VF-946 ကိုပြုပြင်သည်
ပုံနှိပ်နိုင်သော UHF RFID Soft Anti-Metal Tag VT-200
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အီးမေးလ်ကိုထားခဲ့ပါ၊ 24 နာရီ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြိုးမဲ့ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းထုတ်ကုန်နှင့်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူအဖြစ်, Shenzhen Vanch Intelligent သည်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် RFID နည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်, စီမံခန့်ခွဲမှု, ဦး ဆောင်နည်းပညာများကိုအသုံးပြု။ အသိဉာဏ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်, ထုတ်ကုန်များနှင့် RFID ၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသည်. သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် applications များ, ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း, စက်မှုအလိုအလျောက်, အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, စမတ်မြို့ကြီးများ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, လက်လီ, ထုတ်ကုန် traceability, စသည်တို့. အဆိုပါကုမ္ပဏီထက်ပိုရရှိခဲ့သည် 40 မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်. ထုတ်ကုန်များသည် CE နှင့် FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးပိုမိုတင်ပို့သည် 60 ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများ.
VANCH ©မူပိုင်ခွင့် ©2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.